Porofo an-tsarin'ny halatra | Hevitra MPANOHARIANA |
Porofo an-tsarin'ny halatra
2010-07-06 @ 23:04 in Politika
Gaga ihany ny tena raha nandre ny siosion-dresaka hoe toa misy fitadiavam-pifanarahana hoe eo amin'ny Foibe FJKM sy ny fitondrana FAT amin'izao fotoana izao. Izaho moa na dia tsy nanoratra mivantana aza dia efa nanambara fa diso paika ny mpitarika tao amin'ny HMF tamin'iny 20 mey 2010 iny. Andro izay nisian'ny fifampitifirana teo amin'ny FIGN sy ny Emmoreg. Tsy tokony ho niditra mivantana tao anatin'ny raharaha ireo mpitarika ireo fa "mody" nanohy ihany ny fotoana efa nolazaina ho eny Ambohimanandray Ambohimanarina (miala tsiny amin'ilay fomba fitenenana fa ilaina mandrakariva ny ho mailo). Ny olona efa tonga teny amin'ny Mausolée ihany! Azo lazaina fa tokony ho vita aloha ny adidiny teo. Na teo aza izany fahadisoana paika izany dia tsy ankasitrahako mihitsy izany fitadiavam-pifanarahana izany. Amiko raha mifanaraka amin'ny "ratsy" dia lasa miray tsikombakomba aminy koa. Ho fahadisoana paika fanindroany indray raha izany fifanarahana izany no tontosa.
Voatery miafina ireo mpitondra fivavahana ireo, ekeko izany fa tsy natao hahakivy ny toe-javatra. Lasa manome rariny ireo milaza tena ho mpitondra ireo raha vao misy fifanarahana eo, sady tsy hitana ny teniny na oviana na oviana ry zareo fa ny hanome famaizana izay henjana indrindra aza ny kasainy raha vao mitolo-batana eo ireo mpitondra fivavahana ireo. Tsy izany ihany fa mbola ho avy indray ny daroka sy ny fanizambazimbana ary ny fanitsakitsahana ny zo mahaolona sy ny hasina maha-mpitondra fivavahana azy ireo eo imason'ny mpanaraka azy raha vao misy fibabohana eo anatrehan'ny mpitondra ny tany eo. Ary dia ho avy koa ny fieboeboana fa ry zareo no tena irak'Andriamanitra na	tendrin'Andriamanitra hitondra ka tsy hisy intsony ny hahatohitra azy ireo. Ho lasa henatra ho an'ny fiangonana ihany koa izany raha amin'ny fomba fijeriko manokana.
Hevitra niposaka avy hatrany ireo na dia tsy izay loatra aza no votoaty kasaiko etoana. Misy ifandraisany ihany manko fa resaka FJKM sy fitondrana indrindra no resahina. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana no iompanan'ny resaka eto. Fantatsika fa eo amin'ny sekolim-piangonana dia matanjaka dia matanjaka tokoa ny EKAR, malaza amin'ny fahatsaran'ny fampianarana ry zareo ka dia mifandanja amin'izany ihany koa ny saram-pianarana. Mazava loatra raha voaloa ara-dalàna ny karaman'ny mpampianatra any amin-dry zareo. Ny any amin'ny sekoly protestanta kosa tsy dia tahaka izany loatra fa ireo ankizy avy any ambanivohitra no tena mandalim-pianarana any amin-dry zareo. Matetika anefa ireny olona avy any ambanivohitra ireny no tsy maharaka loatra amin'ny saram-pianarana hany koa voatery somary ahena ny saram-pianarana. Vokany na lasa kely karama ny mpampianatra na tsy voaloa ny karama, antsirambina avy eo ny fampianarana na lasa mikarama any ivelany ihany koa ireo mpampianatra any amin'ny sekoly protestanta. Ankoatra ny zavamisy izany dia maivan-danja ny sekoly protestanta raha oharina amin'ny sekoly katolika.
Hitan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany toe-javatra izany, ny tenany mba nanan-katao ihany. Te-hampisondrotra ny satan'ny sekoly protestanta izy, ary ny sekoly FJKM indrindra indrindra. Na ahoana manko mety ho filaza na ahoana dia ny tenany no saiky ho mpanohana voalohany ny fanatsarana ny sekoly FJKM manerana an'i Madagasikara. Ny fananganana ny Lycée FJKM tamin'ny tanandehibe no napetraka voalohany, ary niainga tamin'ny fananganana foto-drafitrasa izany. Ny ankamaroan' ireo Lycée FJKM vaovao naorina ireo dia saiky nanakaiky fiangonana FJKM iray tamin'ny ankapobeny. Tanàna roa nananganana izany Lycée FJKM izany no hasehoko anareo, ary dia mariho sy jereo tsara ny endrik'ireo maritrano ireo. Tany Antsirabe sy tany Mahajanga ireo sary ireo no nalaiko ary tany amin'ny taona 2008 tany avokoa ny nakako azy. Soa aloha fa naka ireo sary ireo ho vavolombelon'ny tantara.
Ny sary roa dia tany Vatofotsy fa ny anaran'ny fiangonana dia hoe Katedhraly Mahafaly Fahazavana (izaho no manao "tsipelina diso" eto nefa izao no maharesy lahatra ahy) izay miorina ao Antsirabe avaratra, izany hoe ety am-pidirana ny tanàna raha avy aty an-drenivohitra Antananarivo. Na ny fiangonana aza dia ao haingana no niorina noho ny fahavitsian'ny fiangonana raha mitaha amin'ny isan'ny mpino FJKM. Ny trano sekoly eto dia eo ampananganana ny andrintrano izay vy miloko manga raha tazanintsika tsara.
Ny sary iray kosa dia ny sekoly FJKM izay naorina akaikin'ny FJKM Ziona Vaovao Mahajanga. Eto dia hitantsika miharihary fa raha amin'ny sakan'ny trano dia 6 ny isan'ny andry vy, 17 kosa ny isan'izany andry vy izany raha manaraka ny lavan'ny trano ary 3 ny isan'ny rihana. Tsara homarihina manko izany toe-javatra rehetra izany fa raha mitovy ny maritranon'ny Lycéé FJKM Antsirabe sy Mahajanga dia azo heverina avy hatrany fa ho tahaka izany avokoa ny maritranon'ny Lycée FJKM rehetra manerana an'i Madagasikara. Ny tafon'ny trano moa raha jerentsika dia tsy tena marindrano fa somary mitady ho boribory izay ihany. Marihiko hatreto fa ireo tanàna roa ireo ihany no voatsidiko ka azoko sary tamin'ny taona 2008, nefa azoko antoka fa mitovy avokoa ny maritrano. Mazava loatra ihany koa fa manana fitovitovizana endrin-tranon'ny vondron'orinasa tiko ihany koa ilay endri-trano.
Mety hisy ny hitsikera avy hatrany hoe filohan'ny Malagasy iray manontolo izy koa nahoana no ny sekoly FJKM ihany no tadiaviny hokarakaraina fatratra. Filohan'ny Malagasy manontolo tokoa izy saingy tsy azo adinoina ny maha-ao amin'ny FJKM azy izay tsy zakan'ny sasany loatra. Mba manana ny adidiny isankarazany ihany koa izy ary tsy ny volam-panjakana no voatery ho nananganana ireny sekoly ireny. Manana ny fandresendahatra ao aminy izy raha nanapa-kevitra fa ny fampitomboana ny ambaindain'ny sekolim-piangonana no nataony fa tsy ny an'ny sekolim-panjakana ohatra.
Tonga ny fotoana, niongana ny filoha Ravalomanana, nozimbazimbaina ny filohan'ny FJKM, dia norobaina ihany koa ny fananan'ny FJKM indrindra fa ireo fitaovana saiky hananganana ny Lycée FJKM izay notantaraiko teo ambony ihany. Nalaza tamin'ny fiandohan'ity taona ity ny fampanantenana nataon'ny fitondrana hanomezana trano ho an'ny mpianatra tany Barikadimy, Toamasina sy teto Ankatso, Antananarivo. Voasakan'ny mpino tany Toamasina ny saiky handrobana ireo vy fanorenana ny trano (izany hoe ilay andry vy miloko manga efa notantaraiko tetsy ambony), enga anie mba ho izay hatrany fa tsy hoe lasan'ny MPANDROBA ireo fitaovana ireo amin'izao fotoana izao. Lasan'ny MPANGALATRA kosa ireo fitaovana rehetra saiky hananganana ny Lycée FJKM teto Antananarivo, izay nipirina tamina toerana iray teny Alarobia.
Fotoana fohy taorian'izany fandrobana izany dia nirehaka ny sasany fa hanangana trano ipetrahan'ny mpianatra eny Ankatso. Herinandro vitsivitsy taorian'ny fametrahana ny vatofehizoro dia indro fa niorina ireo trano anankiroa. Dia nipoitra ny entana halatra mba ho an'ny mpianatra... henjana ny zavamisy an! natao ho an'ny mpianatra ihany no niafaran'ireo entana halatra nokasaina ho an'ny mpianatra. Raha tsy mety hiorina ny trano ao Barikadimy satria ny tany Analakinina no nokasaina voalohany halaina hanaovana ny fanorenana, fa enga anie ho diso izay fiheverako izay fa enga anie sady tsy voaroba ny entana tao Analakininina Toamasina nefa an-dalam-panorenana ihany koa ny trano ho an'ny mpianatra ao Barikadimy.
Raha ny ao Ankatso manko dia be loatra ka lasa porofo fa ny fitaovana nalaina tao Alarobia ireo nananganana ny trano eo Ankatso ireo. Andry vy miloko manga antitra, 6 no isan'ny andry amin'ny sakan'ny trano ary 17 tahaka ilay tranon'ny sekoly FJKM tany Mahajanga ny isan'ny andry manaraka ny lavany, telo ny rihana ary somary boribory fa tsy tena marindrano. Fehiny, ny sary fotsiny jerena dia hamarino ka ho tahaka ny ahoana ny fifanarahana teo amin'ny mpangalatra sy ny nangalarana ankoatra ny famerenana ny entana halatra amin'ny tompony?
Jentilisa teto Antananarivo 07 jolay 2010 na 07-07-10 amin'ny 01:00